नेपालमा बाख्रा पालनको सम्भाव्यता, कस्तो र कसरी पाल्दा राम्रो ? « गोर्खा आवाज
८ भाद्र २०७७, सोमबार ००:००
काठमाण्डौ । फुर्सदको समय सदुपयोग गर्दै आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने भावनाको साथ आर्थिक सबलिकरण गर्न चाहानेहरुका लागि बाख्रा पालन एउटा राम्रो व्यवसाय हो। व्यवस्थित तरिकाले सुरु गर्ने हो भने थोरै लगानीबाट पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले यस व्यवसायप्रति युवाहरु आकर्षित हुन थालेका छन् ।
व्यवसायको सुरूवात लगानी कति र कसरी गर्ने भन्नेमा भर पर्छ। उन्नत पाठा किनेर हुर्काउने वा बाख्रा किनेर प्रजजन् मार्फत बढाउने भन्ने कुरा सुरूमै निर्णय गर्नुपर्छ । एकैपल्ट धेरै ठूलो लगानी गर्नुभन्दा पनि पहिला सानोबाट सुरू गरेर बढाउँदै लानु राम्रो हुन्छ । बाख्राले वर्षमा दुई पटक बच्चा जन्माउछ। उन्नत जातको विशेष बाख्रा भए जोडी पाउने सम्भावना हुन्छ । यसरी उन्नत जातको बाख्रा पालेमा एउटा बाख्राबाट वर्षमा ४ वटा सम्म पाठापाठीहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कस्तो बाख्रा पाल्दा राम्रो ?
तराई बाख्रा: तराई तथा भित्री मधेश (३०० मिटर सम्म)खरी/पहाडी बाख्रा: तल्लो र मध्य-पहाडी क्षेत्र (३०० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्म)सिन्हाल बाख्रा: उच्च पहाडी क्षेत्र (१५०० मिटर देखि २५०० मिटर सम्म)च्याङ्गरा: हिमाली क्षेत्र (२५०० मिटरभन्दा माथि)स्थानीय बाख्रा र जमुनापारी बाख्राबीच प्रजनन (क्रस) गराएर निस्केको वर्णशंकरजात: तराई, पहाड, र उच्च पहाडी क्षेत्रस्थानीय बाख्रा र बार्बरी जातको बाख्रा बीच प्रजनन गराएर निस्केको वर्णशंकर जात: तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रजमुनापारी: तराई तथा मध्य-पहाड(१५०० मिटरसम्म)बार्बरी: तराई तथा मध्य-पहाड(१५०० मिटरसम्म)
नेपालमा रहेका रैथाने बाख्राका जातहरु
(हाल तराई बाख्रा को सुद्द जात पाउन अलि कठिन छ )
नेपाल मा आयात गरियका बिदेशी जातहरु
७) सिरोही (अज्मेरी )
सानन बाख्रा विषेशगरि दुधको लागी प्रख्यात छ । हाल नेपालमा बोएर बाख्रा को माग अधिक रहेको छ। स्थानीय खरि जातको बाख्रा सन्सारको असल आमा मानिन्छ ।
कस्ता घाँस लगाउने?
बाख्रा को लागी उप्युक्त घाँस
५) मोरिङा (सितल चिनी)
११) इपिल इपिल
घाँस लगाउँदा डाले घाँस लगाउदा राम्रो हुन्छ । देशको भुगोल अनुसार यी घाँस लगाउने स्थान पनि फरक फरक हुन्छन्। घाँसखेतीको लागि गुणस्तरीय घाँसको बिउ तथा बिरुवाको छनौट गर्न जरुरी हुन्छ। वर्षभरि हरियो घाँस उपलब्ध गर्नका घाँसखेती सम्बन्धि ज्ञान र सिपको पनि आवश्यकता पर्दछ।यसको लागि बढी उत्पादन दिने पौष्टिक तत्वहरु प्रशस्त भएका एकवर्षे, बहुवर्षे, डालेघाँस तथा भुइँ घाँसका प्रजातिहरु व्यवस्थित रुपले लगाउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता घाँसहरु सिजनेली तथा बहुवर्षे हुन्छन्। सिजनेली घाँसहरु उपयुक्त सिजनमा जमिन तयार गरि छर्नुपर्छ र डाले घाँस उत्पादनको लागि नर्सरीमा बिरुवा तयार गरि उपलब्ध जमिनमा व्यवस्थित तरिकाले ब्रिक्षरोपण गर्नुपर्छ।
जङ्गलमा चराउन लैजानुभन्दा घाँस काटेर टाट्नोमा हालिदिएर खसीबाख्रालाई खुवाउनु राम्रो हुन्छ । जङ्गल लाँदा ब्याउने शक्ति कम हुनुका साथै बाख्राको मासु नबढ्ने समस्या आउन सक्छ। एउटा बाख्रा को लागी दैनिक ५ केजी घाँस आवश्यक हुन्छ । जसमा १.५ केजि कोसे , ३.५ केजि अकोसे घाँस मिलायर दिनु पर्छ । सधारणतया बाख्राले आफ्नो सारिरिक तौलको ३% सुख्खा पदार्थ खान्छ
खोर कसरी बनाउने? बाख्राको खोर कस्तो बनाउने भन्ने कुनै निश्चित आकार छैन। जुनसुकै मोडलको खोर बनाउदा पनि केहि आधारभुत कुराहरूलाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। खोर बनाउदा बाख्रा बस्ने टाँड जमिन भन्दा कम्तिमा ९० सेन्टीमिटर अग्लो स्थानमा बनाउनु पर्दछ। यसरी खोर बनाउदा बाख्राको बड्कौला (दिसा) र पिसाव बाट आउने गन्ध पुरै खोर भित्र आउदैन। ध्यान पुर्याउन पर्ने कुरा के छ भने दिसारपिसाव कुहिदा निस्किने ग्याँसहरूले साना-साना पाठापाठीको वृद्धि विकासमा फरक पार्नुको साथसाथै गर्भवती बाख्रालाई तुहाईदिन सक्छ।
बाख्राको खोर जमिनबाट केहि अग्लो कम्तिमा ९० सेन्टीमिटर बनाउदा दैनिक वा समय समयमा सफा गर्न सकिन्छ जस्ले गर्दा मलमुत्र कुहिएर गन्हाउने तथा हानिकारक ग्यासहरू निस्किने प्रभावहरू न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। हावा आवतजावत हुने र घामको प्रकाश भित्र पर्ने गरी भेन्टिलेसनहरु बनाउनुपर्छ। घाँस हालिदिनका लागि राम्रा टाट्नाको व्यवस्था गर्नुपर्छ| खोरलाई सफा राख्नुपर्छ र चिसोबाट बचाउनुपर्छ। ब्याउने बाख्रा, पाठापाठीहरु, खसीहरू र बोका सबैलाई आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै खोरमा राख्नुपर्छ।
बोका कस्तो लगाउने र कुन बेला लगाउने ?
बोका लगाउदा आफ्नो खोरमा भएका बाख्रा संग कम्तिमा ६ पुस्ता संग नाता नपर्ने (मान्छेको जस्तै, र मामारफुपुका चेला-चेली समेत पार्न नहुने) बोका पुर्ण स्वस्थ छ भने मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। बोका ९ महिना पुगेपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ र यदि ९ महिना पुगेको छैन भने कम्तिमा ६ महिना पुगेकै हुनु पर्छ। ६ वा ९ महिना पुगेको बोका पनि राम्रो संग बढेको छैन भने प्रयोग गर्नुहुँदैन। ३० वटा पाठीहरूलाई एक बोका पर्याप्त हुन्छ।
बाख्रालाई कुन समयमा बोका लगाउने ?
गाँउघरमा सामान्यतया ४ देखि ६ महिनाको उमेरमा पाठीहरूलाई बोका लगाइन्छ। ४ देखि ६ महिनाको पाठीलाई बोका लगाउनु भनेको १३-१६ वर्षकी युवतीहरू गर्भवती भए बरावर नै हो। भन्नुको मतलव उक्त उमेरमा पाठीहरू शारिरिक रूपले परिपक्क भएका हुदैनन्। यस्तो बेलामा पाठी गर्भवती भएमा सानो पाठा-पाठी जन्माउने, जन्माउन समस्या हुने, पाठा-पाठी तुहिने र माउ मर्ने सम्मको अवस्था देखिएको छ।
एक पटक बच्चा जन्माए पछि बाख्रालाई प्रसस्त खुराक पुगेको अवस्थामा १५ दिन भित्रै बोका खोजेको देखिन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था भएमा उक्त बाख्रालाई बोका लगाउन हुदैन। यस्तो अवस्थालाई मानिसमा दाँज्ने हो भने हरेक वर्ष बच्चा जन्माएजस्तै हो। यसो गर्दा बाख्राको माउ अर्को गर्भको लागि शारिरिक रूपले परिपक्क भएको हुदैन। यस्तो अवस्थामा पहिलो बेतको पाठापाठीको दुध चाँडै सुक्ने भएकोले उनीहरूको पोषण पुग्दैन र पछिल्लो बेतमा दुध राम्रो संग आउदैन र आए पनि पर्याप्त पोषणयुक्त हुदैन् ।
गर्भवती, सुत्केरी र बच्चाको स्याहार :
बाख्रालाई बोका लागेको २१ दिन सम्म बाख्रालाई साविक खुराकनै दिनु पर्दछ। २१ दिन पछि ४ महिना सम्म खुराकको मात्रा एक तिहाईले बढाउनु पर्दछ। गर्भवती भएको ४ महिना पुगेपछि साविकको खुराक भन्दा दोब्बर मात्रामा खुराक दिनु पर्ने हुन्छ जस्ले गर्दा गर्भका पाठापाठी राम्रो संग हुर्किन सक्छन र जन्मे पछि माउले प्रसस्त दुध पुर्याउन सक्छ।
खुराक के दिने घाँस र दाना कति मात्रामा खुवाउने :
बाख्राको खुराकमा हरियोघाँस र दानाको मात्रा राम्रो संग मिलेन भने राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न। त्यसैलले घाँस र दानाको सहि सन्तुलन मिल्न जरुरी हुन्छ। घाँस दिदा कम्तिमा ७० प्रतिशत हरियो र ३० प्रतिशत सुकेको घाँस भएको उपयुक्त मानिन्छ। तर हरेक मौसममा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिदैन। तर गाँउघरमा घाँस दिदा जाडो सिजनमा डाले घाँस र नलरपरालरखर को मात्रा मिलाएर दिन सकिन्छ भने वर्षाको वेलामा भुईघाँस, डालेघाँस तथा मकैको खोस्टाको मात्रा मिलाएर दिन सकिन्छ।
बाख्रापालन पद्धतिमा सुधार कसरी गर्ने?
• सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउने र उन्नत खोरको व्यवस्था गर्ने
• लवणहरु, नुन र भिटामिनहरु नियमित रुपले दिने व्यवस्था मिलाउनेबोका
• बाख्री साना पाठा-पाठी, खसी र बयस्कहरुलाई राख्ने अलग-अलग व्यवस्था मिलाउने
• वर्षको २ पटक वह्य परजीवीबिरुद्ध औषधी पानीले नुहाइदिने व्यवस्था मिलाउने
• औषधीहरु नियमितरुपले खुवाउने व्यवस्था मिलाउनेसमय-
• समयमा भ्याक्सिनहरु दिने व्यवस्था मिलाउने
• धाप, दलदल क्षेत्रमा चर्न जान नदिने
सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य सल्लाहहरू :
कस्तो छ यसको व्यापार?
खसी किलोको आधारमा बिक्री हुन्छ। जति धेरै बढाउन सक्यो उति फाइदा हुन्छ। कतिपयले आफ्नै मासु पसल खोलेर मासु बिक्रि गर्ने गरेको पाइन्छ। सानोतिनो बजार नजिकै भए बिक्री नहोला कि भन्ने डर पनि यसमा हुदैन। इन्डियाबाट वर्षको खरबौंको खसी बाख्रा नेपाल भित्रिन्छन्। आफ्नै देशमा यसको उत्पादन गर्ने हो भने व्यवसाय निकै राम्रो सँग फस्टाउनेछ।